Siyini isigqoko sebhayisikili esiphephe kakhudlwana? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Izilinganiso zesigqoko sebhayisikili - imibuzo ejwayelekile
Siyini isigqoko sebhayisikili esiphephe kakhudlwana?
IBontrager Rally MIPS ithole amaphuzu aphezulu ku-ukuphephaphakathi kwazo zonkeizigqoko zokuzivikelaihlolwe ngo-2020.
Yisiphi isigqoko sebhayisikili esihle kakhulu sokulwa ngenkemba? - Ake sixoxe ngakho. (Amasongo e-alamu) (ukudlala isihloko somculo) (ukuqhuma komlilo) Sawubona ekuseni wasenganekwaneni. - Amabhayisikili ayindlela enhle yokuhamba edolobheni futhi uzungeze ngasikhathi sinye, uzijwayeze, uqaphele imvelo futhi unciphise ukucindezeleka emgqeni wakho - Kulungile, namhlanje ngeke sikusize ucindezele umugqa wakho ophansi, kepha sizokusiza Vikela leyo noggin ngokunquma isigqoko sebhayisikili esihle kunazo zonke ongasithola ngaphansi kuka- $ 100, sekuyisikhathi---- ♪ Ngisemgwaqweni omkhulu oya kwaHel ♪♪ Met ♪♪ Ukubona ukuthi yikuphi okuhle kakhulu - Kulungile, manje sithuthukise uchungechunge lwezivivinyo eziqinile kodwa hhayi neze ezingenangqondo.
Umuntu othile angalimala. Ngiyethemba ukuthi akusimina. Mhlawumbe kufanele ngigqoke isigqoko sokuzivikela. - Ho! Sizosusa isigqoko sokuzivikela esisebenza kabi kakhulu ethangeni ngalinye kuze kube yilapho sineqembu elisele lodwa. - Nazi izigqoko zokuzivikela esizozihlola.
Isigqoko sebhayisikili seBel Adult Quake sabangu-35. - Isigqoko sokuzivikela seKali Chakra Plusbike sabangu-50. - IBern Lennox sabangama-60. 80.- Endaweni yokuphepha yebhayisikili! - Sisophahleni lwethu - Manje ubungagibela ibhayisikili lakho emgwaqweni, kodwa-ke kufanele ubhekane nezimoto ngakho-ke kufanele ukuthi ushayela ezakhiweni.
Kufanele ube ngumgibeli ophahleni. - Roof nabagibeli! - Futhi uma ungumgibeli ophahleni ufuna ukuba nesigqoko sokuzivikela esizovikela ikhanda lakho uma uwa esakhiweni. Sizobaphosa phansi bese ubona ukuthi baphakamisa kanjani. (Umculo weRock) - Abathathu. - Kulungile - Kubili, kukodwa. (Angel choir music) (Izigqoko zokuzivikela) - Woo! - Oh. - Yeka ukungcola! - A lot of ingqondo. - Kulungile, ake sikhulume ngakho. - Kulungile, ngicabanga ukuthi kuphephile ukusho ukuthi bonke laba bantu balimele.
Sinayo kule yokuqala, iGiro, sinamaqanda amabili ngokuphelele kumaqhinga. Kulungile lo ongu-Abus noma u-Abbis, asiqiniseki ngempela. - Kubukeka sengathi inqe lingene lapho - (chuckles) Asinawo amaqanda amawashi.
Kulungile, ngakho kunjalo ezansi okwamanje. - Kulungile kanye neKali. Hhayi kuwashi, kuwashi. - Oh kulungile. - The Bel. - O, bheka lokho.
Njengesidleke esijwayelekile ezansi lapho. - Cha, bonke baqhuma. - Ngaphandle-- - Kukhona okukodwa. - Omunye ngobuhlakani ngokuphelele. - Omunye ngobuhlakani ngokuphelele. (ephihliza iqanda) Khona lapho, kulungile.
Futhi ekugcineni uBern. Ah, akukho lutho oluqinile lapha, ndoda. - Kulungile, ngakho-ke kuphathelene ne-Abus neBern. - NgeBern, ubuchopho obuningi bunesidleke - Kulungile uma ufuna ukuchoboza ubuchopho bakho okungenani ufuna ukuthi bahlale kusigqoko sokuzivikela - Kuningi ubuchopho obudidekile kodwa busekhona.
Ngakho kimi kucace bha. UBern uvutha engabaselwe. (Umculo we-Rock) Ake sithi unomzila wephepha e-Arizona futhi uye ephathini enkulu kakhulu ephathini lenkampani yakho ngoJulayi 4, ngakho-ke uvuka ngosuku olulandelayo emini futhi ucabanga ukuthi ngidinga ukuletha lawo maphepha, kodwa yini engikhathazayo, kuyashisa! - Yebo, futhi awufuni ukuthi ikhanda lakho lomuntu liphekwe kwisigqoko sokuzivikela kanti namakhanda abantu ayabiza ngakho-ke esikhundleni seziteki esisebenzisa ama-steaks, kanye nalezi zibhamu zokushisa zisusa isigqoko esenza insimbi ipheke okuhle kakhulu.
Dubula izibhamu zakho, Xhumanisa. (Heat guns whir) - Kulungile, ngisho nokushisa kukho kokubili. O kuyashisa - Hhayi-ke, ungahle ulingeke ukuthi uthi, ima kancane, bafana.
Lowo onomoya omncane kufanele abe opholile kunayo yonke ngoba uzongenisa umoya omningi. Mhlawumbe uze wafika ngisho nokuphawula ngalokho. Qagela ukuthi yini, awulungile ngoba imishanguzo ingena ekushiseni futhi ipheka ubuchopho bakho njenge-steak - Yeka ukuzama ukuba neqiniso ngayo yonke into - Isayensi leyo! - Izingalo zami ziyakhathala .Angiphawuli ngalokhu. - Manje ngibona okuthile crispy.
Ncibilika kancane kuzigqoko ngokwazo. Okungenani lezi ezimbili. - Lokho kunuka kabi .- (ukuhleka) Yebo, ufuna ukuqala ukucabanga ukuthi kunuka kamnandi bese uhogela isigqoko sokuzivikela esivuthayo. - Ugh.Ugh! - Kulungile, mayisimise.
Kuvulwe izibhamu ezishisayo. - Kulungile, ake siqale lapha nge-kali. O, kuyashisa lokho! Asambe.
Uma ngibheka le steak ngemuva manje, kukhona umpheki omncane, kepha hhayi kakhulu. I-Abus, i-Abus kadabbus.- Lokho kuhle kakhulu futhi.Kuphekwe kancane ngaphambili - Kuphekwe kakhulu- Kusondele kancane kwi-cerebral cortex, lapho uthatha khona izinqumo.
Ake sibheke i-bel. O wow - Whoa - Sine-steak enhle lapha. UBel, akenzi kahle. - Cha bese uzibhekela isigqoko sokuzivikela, kepha yilanga ilanga ebelizokwenza ngalo - Yebo, ubuyobe unemisebenzi yokuphindaphinda kulesi sikhathi.
Uzogijima ngokwemvelo. Futhi manje sizongena eGiro. Ingabe nguJee-ro, akunjalo? UJai-ro? Ingabe iqhawe? - Gee-ro.- Gee-ro.- Guy-ro. - O, oh, oh, kuphekwe kahle futhi. - Yebo, kunjalo.- Kodwa ngiyakwazi ukusho ngokushesha uBat, ibhande liphekwe kakhulu, ndoda.
Kulungile, isheke lokugcina lapha, konke lokhu kungubuchopho be-steak. - Imayini ibukeka kahle. - Ezami zombili ziphekwe kahle kodwa ngicabanga ukuthi siyabona impela ukuthi ibel iphekwe kakhulu? Kungakho ubuchopho bakho buzobiliswa kakhulu, yingakho uBel, ngiyaxolisa ngokuthi ufinyelele emzuliswaneni wesibili kodwa manje usususiwe - uyazi. (Umculo we-Rock) Izigqoko zokugqoka akuzona ukuphela kwento ongayidinga isigqoko sokuzivikela ukuze uvikele ikhanda lakho mhlawumbe ugibele ibhayisikili nabangane bakho, uthathe indlela engafanele bese uphelela endaweni embi - Ngabe kukhona umuntu owathi indawo embi? - yebo, yebo - yebo lena indawo embi impela, uyazi ukuthi kungani ngoba thina sonke abahambahamba siphethe izinkemba - Ungubani? - Igama lami nginguPaul.
Futhi kwakukhona u-- - Hei Paul - Kwakunomthwalo wezinkemba elolini yawa futhi sonke sathola inkemba, sasivele siphethe izinkemba iminyaka - Kulungile, ubukeka ungumuntu omuhle --- abakwazi ukumela izinto endaweni yangakithi, njengalezi zingane ezincane ezigibela endaweni yangakithi ngaphandle kwabazali bazo, isibonelo. Banesifundo okufanele basifundiswe, baphume endleleni. (Angel choir music) (ukugquma) - What the Paul, Paul? - Yebo, thatha lokho! Usenaso isithupha.
Akafundanga isifundo sakhe, kodwa qagela ini? Ngizofundisa umngani wakhe omncane. (Angel choir music) (Izando zeSword) - Ooh - Lezi zingane zinzima.
Wena hlala emabhayisikili. Angikaze ngikubone ngaphambili. Akukaze kwenzeke kanjena. (Angel choir music) (Knock sword) Hyah! - Yebo, kuhle! Kubi lokho - Le ngane inesigqoko sokuzivikela esiqinile. - Yebo! Kwakukwazi ukubekezela. - Kuhlaba umxhwele kakhulu. - Awuzange uyenze. - Cha, akukaze kwenzeke ngaphambili. - Akuve Amazing.
Lokhu nakanjani kuya emzuliswaneni olandelayo. IGiro inokunikeza okuningi, ngakho-ke singaba khona, ngiyisusa kanjani le nto? - Yebo, kukhona ibhande elincane bese uvele ulivule. Njengazo zonke izigqoko zokuzivikela. -Ngiyabonga.- Le ngane inenye inkinga okufanele ibone umuntu ngayo. - Asisuse neKali, ngoba angazi noma kunjalo, awubheke lokhu.
Uma ubheka lokho - - Ucezu oluhle lapho - Ngakho-ke lesi sigqoko sokuzivikela, nakanjani sidlule. Ngabe kudlule konke? - Awu yebo. - Yebo yebo, inefasitelana elikhudlwana ku-styrofoam, okusho ukuthi i-potash iyasuswa. (Umculo weRock) - Manje isivivinyo esichobozayo - Kuza isikhathi empilweni yawo wonke umuntu lapho efuna ukuphuma aye emgwaqweni athole ukushuka okuncane bese esakazeka lapho, kepha hheyi, ungakhohlwa isigqoko sakho.
Ngoba awazi ukuthi umbhangqwana wesine noma wesine uzofika nini, namasondo awo aqondaniswe kahle nekhala lakho - yebo, ngakho-ke sibophele amakhabe kuzigqoko zethu ezimbili zokugcina futhi manje sizowadlula. (Umculo weRock) (isigqoko sokuzivikela) - O, ngicabanga ukuthi bekuyibo - Lokho bezwe kukuhle, kulungile. Hawu uyazi yini, isibani sikulesi sikhanyisiwe.
Lokho kuyisibonakaliso esihle. - Yebo, wenza kabi. Ayikho engcono kunalena.
Bheka lo msebenzi wokuchoboza. Hewu Nkosi yami. - Lokho kubushelelezi.
Ngokusobala i-noggin ibhujiswe ngokuphelele. Akusekho micabango kuyo. - Hawu.
Bheka lokho kuthatheka. - Manje usuyabona, ngisho ukuthi uchotshozwe ngokuphelele, kusobala, kepha kusenayo - ubuqotho. - Inobuqotho obuthile - futhi ukukhanya kusakhanya! - Iqiniso lokuthi ukukhanya kwavela - ngicabanga ukuthi imiphumela icacile - Yebo, owinile, isigqoko sokuzivikela esisemthethweni seGood Mythical Morningbest yisigqoko se-Abus Hyban City esine-taillight edidiyelwe ye-LED - uyitholile, mngani. - Oh - ukulunga kwami ​​- Ngiyabonga ngokuthanda, ukubeka amazwana nokubhalisa.- Uyazi ukuthi yisikhathi sini manje - Kwenzenjani bafo, nginguRob futhi lona nguMilo.
Sivela eWashington DC futhi njengamanje sihamba ngomfula iPotomic futhi sekuyisikhathi sokujikeleza isondo lezinganekwane - Ah, leyo nja ayinaso isigqoko sokuzivikela - Bheka ujabulile. - I-Tisk tisk. Chofoza isixhumanisi esingenhla ukubona ukuthi amanye amabhayisikili e-BMX awe kanjani nathi ku-Good Mythical More. - Futhi ukuthola ukuthi i Wheel of Mythicality izophelela kuphi uh --- (mumbling) Ngizophela .- Izinto ezinhle ziza ngababili nge-dink encishisiwe bese ziyicwilisa i-diner mug set.
Thola okwakho manje e-Mythical.store.
Ngabe izigqoko zokuvikela ibhayisikili zinezilinganiso?
Ngokubambisana ne-Insurance Institute for Highway Safety, thinabalinganisilesebengu-123izigqoko zebhayisikilikusetshenziswa uhlelo lokuhlola lwe-STAR.Izigqoko zokuzivikelangezinkanyezi eziningi kunikezela ukwehliswa kwengozi yokushayisana ngale mithelela uma kuqhathaniswaizigqoko zokuzivikelangezinkanyezi ezingaphansi.
isikhwama se-musette sokuhamba ngebhayisikili
Uyini umkhiqizo wesigqoko sesigqoko sebhayisikili esihle kunazo zonke?
UKUHLUKUNYEZWAIbhayisikili-Izigqoko zokuzivikelaIHyban 2.0.
ICannondale Intent MIPS AdultIsigqoko sokuzivikela.
IGiro Bhalisa ama-MIP Ezokuzijabulisa Kwabantu AbadalaIsigqoko sokuhamba ngebhayisikili.
I-LUMOS Matrix SmartIsigqoko sokuzivikela.
Phindisela emuva CM-1Isigqoko sebhayisikiliKwabagibeli Abadala.
USchwinn ThrasherIsigqoko Sesithuthuthu.
Izinkulungwane Zabantu AbadalaIsigqoko Sesithuthuthu.
Ephreli 7 2021
Izigqoko zokuhamba ngamabhayisikili zisuke kude namabhakede e-styrofoam iningi lethu esikhule nawo. Zibaluleke kangangokuba ngine shelufu ngasemnyango wami elezigqoko zezigqoko zebhayisikili kuphela. Kuyangibangela amahloni ukuthi zingaki lezi enginazo, futhi ngicabanga ukucisha iqoqo lami njengomsebenzi wobuciko ngokuzayo lapho umama evakashela ngakho akudingeki ngichaze ukuthi kungani omunye umuntu edinga isigqoko sezokuphepha esingamakhilomitha ayishumi nambili.
Ngaphambi kokuthi siqale i-athikili yethu echaza izigqoko zokuhamba phambili zebhayisikili emakethe, sifake izixhumanisi encazelweni yomkhiqizo ngamunye oshiwo, ngakho-ke qiniseka ukuthi ubheka ukuthi yikuphi okukuhlu lwakho lwesabelomali. Ukuqala ngesigqoko sebhayisikili esihle kunazo zonke sinePOC Octal X Spin, abanye abantu ngithanda izicathulo, abanye abantu bathanda izikhwama, futhi abanye abantu bathanda amawashi, kepha ngithanda izigqoko zokuhamba ngebhayisikili. Ngiyavuma ukuthi kuyaxaka ukuba nengxenye yeshumi nambili ekhanda lokuzivikela elenga eminyango engaphezulu, kepha ngifuna ukuqiniseka ukuthi ngihlala nginethuluzi elifanele lomsebenzi, futhi ngicabanga ukuthi kunezinketho ezimbi kakhulu zokusebenzisa imali yakho kunokuvikela ubuchopho bakho.
Okungaqondakali ngisho nokuthi ngijwayele ukudonsa isigqoko sokuzivikela esifanayo nsuku zonke. Noma ngigibela amakhilomitha ayikhulu emgwaqeni noma amamayela amahlanu ukuya ezitolo, i-OCTALX SPIN iyisigqoko sokuzivikela engikhetha u-90% wohambo lwami, yingakho ithole isihloko sesigqoko sokuhamba phambili sebhayisikili jikelele. I-POC isanda kuqhamuka nokuhamba ngebhayisikili, kepha ukugxila kwayo kwezokuphepha kanye nobuhle obuhlukile baseScandinavia kuyigcine ithembekile kulo mkhiqizo.Umkhiqizo we-POC uhlotshaniswa nokubeka ukuphepha kwabagibeli ngaphezu kokukhathazeka ngobuhle noma kwe-aerodynamic, kepha izinhlobo zayo zakamuva kuvele ukuthi Kufakazelwe ukuthandwa ngama-racers ngenxa yokuxhaswa kwabo yiqembu laseCannondale lohambo lokuhamba ngebhayisikili.
I-POC ithanda imibala egqamile ukwenza abashayeli babonakale ngokwengeziwe emjahweni nakumigwaqo, futhi lokhu kunenzuzo eyengeziwe yokwenza abagijimi babo bagqame esixukwini futhi banikeze lo mkhiqizo isithombe esiqinile. Ukwenza i-Octal X SPIN, i-POC yathatha isigqoko sayo sebhayisikili esidumile - i-Octal - futhi yathuthukisa i-Fe w ukuze siyenze ilungele ngokulingana ukusetshenziswa komkhondo. Kanye negobolondo elimboza ngokuphelele ulwelwesi - isici esivamile samasigqoko asemgwaqweni - ubuchwepheshe be-POCadded SPIN.
I-SPIN, emele iSheda Pads Ngaphakathi, ivikela imithelela ye-oblique - into amavolumu amaningi ajwayelekile angalungile kangako kuyo. Ngenkathi imithethonqubo ye-CPSC inganikeli ukuvikelwa kulokhu kushaqeka, i-POC inikeza ubuchwepheshe be-SPIN kubantu abafuna ukuvikelwa ngaphezu kobuncane bomthetho. Umsebenzi omkhulu wesigqoko sokuzivikela ukuvikela ubuchopho bakho, yingakho i-POC yenze leli phuzu labo eliyinhloko lokuthengisa le-Octal X SPIN.
Ukuphepha kungaba yisizathu esihle sokukhetha i-Octal X SPIN, kepha ngeke wehliswe uma kukhulunywa ngokusebenza nakho. Ababuyekezi bathanda imichilo ethokomele nama-vents angama-21 enza isigqoko sokuzivikela sinyamalale lapho sisetshenziswa. Omunye obehamba ngebhayisikili uthe isigqoko sokuzivikela esisha 'sibonakala sihambisa umoya kangcono kancane' kunesemodeli yangaphambilini.
Uhlelo olusebenziseka kalula futhi oluguqulwa kalula luye lwanconywa ngochwepheshe. Babazisa isisindo esiphansi sesigqoko sokuzivikela, esikwenza ukuthi silungele ngokulinganayo ukusetshenziswa komgwaqo noma kwentaba. Ekugcineni, umbuyekezi oyedwa uthole i-adjuster esheshayo yokuthola i-Octal ebhokisini iye ebhayisikili ngemizuzu emibili.
Ngenkathi ngiqala ukufaka i-Octal X SPIN, ngabona ukuthi ingaphezulu nangemuva kwekhanda lami kwakumbozwe kangakanani uma kuqhathaniswa nesigqoko sokuzivikela sendabuko sebhayisikili lomgwaqo. Lokhu kwenza i-Octal ibe yindlela ephephe kakhudlwana, ikakhulukazi ekugibeleni emgwaqeni lapho kwehla isivinini esiphansi kushaye khona ezingxenyeni ezahlukahlukene zekhanda. Yize ubukhulu bayo bukhulu, i-Octal ayizwanga inzima ukuyisebenzisa futhi izikali ziqinisekisile ukuthi incintisana kakhulu ngama-gramu angama-267 eMedium.
Indawo yokuxhumana enkudlwana kwakubonakala ingathinti ukungena komoya, ngisho nasekukhuphukeni kancane isigqoko sokuvikela sasiqinisekisa ukusakazwa komoya okwanele. Kusihlwa, lapho ngiya emsebenzini, ngazizwa ngikhuthazwa igobolondo elinombala o-orenji obonakala kahle futhi ngathola ukuthi i-'Ery Garage 'ilusizo ekubambeni izibuko zami zangaphandle ngaphandle kokuthi iphume. Okulandelayo, sinesigqoko sebhayisikili sebhajethi esihle kunazo zonke esihamba ngeBern FL1 Trail.
AmaRandi angamakhulu amabili namashumi ayisihlanu angabukeka njengemali eningi ongayisebenzisa kokuthile okuhloselwe ukwephula. Yize kuyiqiniso ukuthi unengqondo eyodwa kuphela futhi kufanele uvikelwe, ukuqala kwakho ukuhamba ngebhayisikili kungabiza ngokwanele. Ngenhlanhla, zonke izigqoko zokuzivikela ezivunyelwe ukusetshenziswa e-U.S. Kumele zenze izivivinyo ezifanayo, okusho ukuthi yize izigqoko ezishibhile zingaba nesisindo esingaphezulu noma zinikeze umoya omncane, zizokuvikela kanye nabafowabo abasezingeni eliphezulu.
Ngomzila weFL1, ukuyekethisa kuncane kakhulu. UBern usebenzisa ukwakhiwa okufanayo kwe-in-mold 18-vent njengaphezulu kwezigqoko zalo zomugqa, kepha wonga imali ngokusebenzisa ukudayela okungekho emshinini wokukhiya ongemuva. Isigqoko sokuzivikela sinikeza i-visor yokuvikela emvuleni, elangeni nasezimileni ezisendleleni.
Ayizizwa yehluke kakhulu ekusetshenzisweni kunama-helmetti abiza kakhulu ngenxa yesisindo sayo esiphansi sama-gram angama-271 kuphela nokungena komoya okuningi. Umagazini webhayisikili uthande umzila we-F1, ngokulungiswa kwawo ukuphakama kwamazinga amane okulingana nokuchofoza okungaxutshwe nalutho kanye nezinketho zombala kubo bonke abagibeli, isigqoko sokuzivikela sabonakala sikhungathekile ukuhlala phezulu emakhanda ababuyekezi eBike Rumor, okungaba yinkinga ephansi isivinini. Isigqoko sokuzivikela asinikezi i-MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) noma, kepha iBERN ihlinzeka ngemodeli ye-FL1 nge-MIPS ngama- $ 30 ngaphezulu.
Abanye ababuyekezi bathole usayizi omncane omncane, kepha abasebenzisi be-Amazon bayaqaphela ukuthi iBern insizakalo enkulu yamakhasimende inikezela lapho usayizi kuyinkinga. Okulandelayo, sinesigqoko sebhayisikili esiphakeme kakhulu esiya eGiros Aether. UGiro sekuyisikhathi eside edume ngokuhamba phambili ngokuhamba ngebhayisikili.
Omakalabha bakhona banqobe imijaho yamabhayisikili cishe kuzo zonke izigaba futhi lo mkhiqizo usungule ngokusebenza hhayi kuphela kepha nakwezokuphepha. Imikhuba emibili emikhulu yezigqoko zokuhamba ngamabhayisikili muva nje kube yi-aerodynamics kanye nokuvikelwa komthelela omningi (MIPS). Bobabili babegitshelwe nguGiro kodwa kuze kube muva nje bobabili badinga ukuyekethisa okwaholela ekutheni abagijimi babe nezigqoko eziningi.
Izigqoko zokuzivocavoca umoya ezinjenge-Aerodynamic, njengesizukulwane sokuqala sakwaGiro i-Air Raid, zazishesha endizeni kodwa zazivame ukuba nzima futhi zingenise umoya omnene okwenza kube inketho embi ezinsukwini ezingamagquma. UGiro wethule amasistimu amaningi wokuvikela umthelela kuzigqoko zokuhamba ngamabhayisikili e2015, kepha esizukulwaneni sangaphambilini sezigqoko ze-MIPS, ubukhulu kwesinye isikhathi bebungalungile kanti i-MIPS liner ibithambekele ekukhaleni okucasulayo futhi ibambelele kwizibuko zelanga eziboshwe noma ezinwele ezinde. I-Aether yisigqoko sokuzivikela esingagudluki.
Esikhundleni sokubeka ungqimba lwe-MIPS ekhanda lomgibeli, uGiro ufake izingqimba zegwebu le-EPS, okuholele ekugqokeni isigqoko sokunethezeka futhi esinamandla. Izikhala eziyishumi nanye ezinkulu zenza isigqoko sokuzivikela sicishe sinyamalale. Ababuyekezi bochwepheshe bathi i-Aether 'ibiphakathi kwezigqoko zokupholisa ezipholile kunazo zonke, ezinomoya omuhle kakhulu esake sazigibela ngesivinini esikhulu nesiphansi'.
Inzuzo enkulu ye-Aether ingeyokuthi akekho ofuna ukuyivivinya. Ukuvikelwa komthelela ngohlelo lwebhola le-MIPS kungcono kunakuqala, futhi manje ukulingana nomoya omncane wesigqoko sokuzivikela akuyekethisi, ngakho-ke uhlala uvikeleke kakhulu ezimweni ezimbi kakhulu. Ihambile i-liner MI PS ephuzi yamamodeli wangaphambilini.
Esikhundleni salokho, uhlelo olusha lwe-Spherical MIPS luhlanganiswe nesigqoko sokuzivikela futhi linikeza ukuvikelwa komthelela omningi nokungakhululeki okuncane. Uhlelo oluguquguqukayo lwe-Roc-Loc 5-Fit luqinisekisa ukuthi isigqoko sokugcina ikhanda sigcina okulingana okubizwa nguchwepheshe oyedwa ngokuthi 'ukhululekile ngokukhethekile' kubo bonke ubujamo nobukhulu bekhanda; UGiro uphinde wathi isigqoko sokuzivikela sisebenza kancane ngokwengeziwe kunendlela yakhe yamanje yeSynthe nesisindo kucishe kufane. Omunye umgibeli webhayisikili uqaphele ukuthi lokhu kuhlanganiswa kohlelo lwe-MIPS kwakusho ukuthi wayelingana nosayizi ukusuka kokuphakathi kuya kokukhulu, futhi nalokhu nakho kwami.
IGiro inikeza ishadi losayizi olisebenzisekayo ongalisebenzisa ukuze likusize ukhethe usayizi wesigqoko sokuvikela ikhanda lakho. Futhi ekukhetheni kwethu kokugcina, sinesigqoko sebhayisikili esiphathekayo esihamba phambili esiya eThe Stack. Amabhayisikili abelana ngamabhayisikili akuyo yonke indawo - kugitshelwe ngaphezu kwamamayela ayisigidi e-NYC nakwezinye izindawo eziningi ezisemadolobheni ezinkulu.
Iningi labantu abagibela amabhayisikili e-bikeshare bakwenza lokho ngaphandle kwesigqoko sokuzivikela, futhi kungaba nzima ukuletha isigqoko sokuzivikela esigcwele lapho uthatha isinqumo sokuhamba ngebhayisikili ozogibela ngalo isidlo sasemini. Yilapho isitaki singena khona. Kuphephe futhi kunethezekile njengesigqoko sokuzivikela esivamile, kepha uma usigoqiwe kuthatha ingxenye yesikhathi kuphela ephaketheni lakho.
Uma usebenzisa njalo amabhayisikili abelana ngamabhayisikili noma ukuhamba, isitaki ngokushesha siba yinto ongeke uphinde uphume endlini ungenayo. Kuyasetshenziswa, iStack sisebenza njenganoma yisiphi esinye isigqoko sokuzivikela sebhayisikili, sigcwaliswe ngokungenisa umoya kanye nebhande lokunwebeka eliguquguqukayo. Njengaso sonke esinye isigqoko sokuzivikela lapha, kufanele sidlulise uchungechunge lwezivivinyo ezinqala ezinquma ikhono lalo lokuvikela ukulimala ebuchosheni uma kwenzeka ukuwa noma ukuwa kwe-Stack kuchofoza ngokuthembekile endaweni endaweni yalo enwetshiwe, ayizange iwele kithi ngesikhathi sokuhlolwa, okuyinto bekuyinto ebesikhathazeka ngayo ngaphambi kokuthi sibeke isandla esisodwa.
Izikhala ezifihliwe nebhande lokunwebeka liqinisekisa ukulingana okunethezeka, futhi isigqoko sokuzivikela singena ngosayizi ababili nemibala emine, ngakho-ke kufanele kube nokuthile kwawo wonke umuntu Mayelana nesitaki, siyaziphatha lapho singasetshenziswa. Esikhundleni sokudinga okunamathiselwe okukhethekile ngaphandle kwesikhwama sakho sobhaka usuku lonke noma ukulenga ngokungafanele esikhwameni sakho sehlombe usuku lonke, isitaki sigoqeka kuso futhi singafakwa ephaketheni, ekhabetheni noma edeskini. Omunye umhloli onolwazi wacabanga ukuthi kuhle ukuthi isitaki, esilingana nosayizi wesitsha sokuthatha, simenze wakwazi ukusibeka ephaketheni lakhe kunokuba asivumele sishayele ngaphandle ngesikhathi sokuzibandakanya nomphakathi.
I-blogger yezokuvakasha iThePointsGuy ithole ukupakishwa kwesigqoko sokuzivikela sisebenziseka kakhulu kangangoba wasikisela njengesipho sohambo lwasedolobheni. Ingapakishwa esikhwameni sokuphatha futhi isetshenziselwe ukuhlola ngokuphepha idolobha elisha. Ngama-gram angama-330 kuphela, isitaki asinzima futhi sincane ngokwanele ukuthi sicishe silingane esikhwameni sehlombe noma esikhwameni.
Uma usebenzisa njalo amasistimu wokuqasha amabhayisikili, izikuta kagesi, noma ufuna ukuqasha ibhayisikili lapho usohambweni, lokhu kuyindlela enhle yokugibela okungenasigqoko futhi ngaphansi kuka- $ 80 indlela eshibhile yokuhlala uphephile lapho uzungeza idolobha. Ngakho-ke izigqoko zethu eziphambili zebhayisikili zika-2019. Siyethemba ukuthi ukujabulele.
Uma usukwenzile sicela ushiye okufana nalokhu ku-athikili futhi uma umusha lapha chofoza inkinobho yokubhalisa. Sobonana ngokuzayo, ube nosuku oluhle.
Ingabe isigqoko sokuzivikela se-MIPS singcono?
Izigqoko ze-MIPSnikela ngezinga elengeziwe lokuphepha kubo bonke abagibeli bamabhayisikili. Ngakho-ke uma usukulungele ukufaka esikhundleni sakho esidalaisigqoko sokuzivikela, imali eyengeziwe engu- $ 20 noma ngaphezulu ukuze ithuthukiswe kokungafani-AMAMIPIukuAMAMIPIimodeli-ifakwe kahle ilifanele inani. Okwamanje,AMAMIPIubuchwepheshe buyatholakala ku-khethaizigqoko zokuzivikelakusuka eGiro, Bell, POC, Scott, noLazer.Februwari 27 2015
Kufanele ngisebenzise malini ngesigqoko sokuzivikela sebhayisikili?
TOisigqoko sebhayisikiliingabiza imali engango- $ 25 nje kuphela, kepha “okuhle”isigqoko sebhayisikilikungabiza njengeokuninginjengo- $ 500 noma ngaphezulu. Kuya ngokuthi yini oyidingayo nokuthi iziphi izici ezibaluleke kakhulu kuwe, okuhleisigqoko sebhayisikiliimvamisa ibiza phakathi kuka- $ 75 - $ 150. Phezulu-kulayiniizigqoko zebhayisikiliimvamisa ibiza ngaphezulu, cishe ngama- $ 250 - $ 350.
Ngabe isigqoko se-nutcase siphephile?
Izigqoko zeNutcasezingu-100%ephephile. Ungacabangi ukuthi bayantulaukuphephangoba nje badlulisa ngokweqile uma kukhulunywa ngokwakhiwa. KonkeI-Nutcaseibhayisikiliizigqoko zokuzivikelabanezitifiketi ze-CPSC 16 CFR 1203 ne-ASTM F1492, ezibenza bazilungele izinhlelo zokusebenza zemidlalo eminingi ekugibeleni amabhayisikili, ukukora kanye nokushushuluza.Aug 25 2020
Yini okufanele ngiyibheke lapho ngithenga isigqoko sokuzivikela sebhayisikili?
Kufanele ngenzenibhekangoba endleleniisigqoko sebhayisikili? Umgwaqo omuhle kakhuluizigqoko zokuzivikelaizosinda futhi ivumele ukuhamba komoya okuhle ekhanda lakho ngemigudu emise ngokukhethekile. Izinhlelo zokugcinwa kufanele ziguquke kububanzi, futhi kufanele kube lula ukuzivumelanisa, noma ngabe ugibele.
Ngabe udinga ama-MIP ngempela?
Ikhanda elifake isigqoko sokuzivikela ngeAMAMIPIizoshintshana kancane kunekhanda esigqokweni ngaphandleAMAMIPI. Yingakho kesidingaiAMAMIPIungqimba wokuba ne-coefficient ephansi kakhulu yokushayisana ukuze unciphise ukujikeleza kwekhanda. '1 jul. Februwari 2020
Wazi kanjani ukuthi isigqoko sokuzivikela yi-MIPS?
TOAMAMIPI-kuhlonyiweisigqoko sokuzivikelakubukeka kucishe kufane nokungafaniAMAMIPI-kuhlonyiweisigqoko sokuzivikelangaphandle kwaniniubheka ngaphakathi, uzokwenza kanjalobhekaumzila omncane ophuzi ngaphansi kwamaphakethe. Kusuka ngaphandle, okuwukuphela kwenkombaukuthiiisigqoko sokuzivikelaihlukile kunenye ngaphandleAMAMIPIkuyintoukuthieminye imikhiqizo inephuzi elincaneAMAMIPIlogo lapho.
Ingabe izigqoko zokuzivikela zebhayisikili ezibiza kakhulu ziphephe?
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, awukho umehluko kwezokuphepha phakathi kwe- $ 30isigqoko sokuzivikelakanye nama- $ 200isigqoko sokuzivikela. Ukuze zithengiswe ngokusemthethweninjengezigqoko zokuhamba ngamabhayisikili, bonke kumele bahlangabezane nemithetho yokuphepha efanayo.Ngakho-kengokuyisisekelo, ukhokhela izinto ezimbili: ukubukeka nokunethezeka.
Yini eyenza izigqoko zokuhamba ngamabhayisikili zibize kangaka?
Okuningiizigqoko ezibizayongokuvamile aqoshiwe futhi enzelwe ukuba kube nokungenisa umoya okuningi, kube lula, kube okuguquguqukayo, kube ntofontofo, kepha ekugcineni, uyabathemba ukuthi bazowenza lo msebenzi. Ngigqoka i-isigqoko sokuzivikelangoba lapho ngigijima kufanele nalapho ngiya emsebenzini ngicindezelwa ukuthi ngigqoke owodwa.
Ungayikhetha kanjani isigqoko sokuhamba ngesithuthuthu esingcono kakhulu?
Ukusiza ukunqamula lo msindo, ukubukeza kwethu izigqoko zokuhamba phambili zebhayisikili zomgwaqo ezihamba phambili zango-2021 kuzokusiza ukhethe isigqoko sokuhamba phambili sebhayisikili lomgwaqo ngezidingo zakho nezidingo zakho, noma ngabe zigxile kwezokuphepha, isisindo, induduzo, umoya omncane, i-aerodynamics, inani, noma okunye inhlanganisela yalezi zinto. Sisebenza Kanjani Isigqoko Sokuhamba Ngebhayisikili Somgwaqo?
Kusho ukuthini ukulinganiswa kokuphepha ngezigqoko zokuhamba ngesithuthuthu?
Izilinganiso zokuphepha kwesigqoko sesithuthuthu zizokhombisa ukuthi zingakunikeza ukuphepha okungakanani. Futhi sonke isigqoko sokuzivikela sehlukile kwesinye. Futhi, kuzodingeka ucwaninge ngokuthola isigqoko sokuhamba ngesithuthuthu esihle kakhulu ngezilinganiso zokuphepha. Ezinye izigqoko zokuhamba ngesithuthuthu zihlala isikhathi eside futhi ziyavikela. Sicela ungabheki ukubonakala kwesigqoko sokuzivikela kuphela ngenkathi usithenga.
Yisiphi isigqoko sokuzivikela sezithuthuthu esicijile kunazo zonke?
Kulawo alingana kahle futhi anethezekile, khetha okukodwa okunesilinganiso esiphakeme se-SHARP safety (Star). USHARP namuhla ushicilele izilinganiso zokuphepha zamakalabethe ezinhlanu ezithuthuthu - iMT Rapide, iSpada Reveal, iShark Vancore 2, iNitro 2300 neViper RS-V171. Lokhu kuthatha inani eliphelele lamasigqoko akalwe ngu-SHARP ukuya